PDF Sanganisa Turu 1.0: iyo nyowani vhezheni yechishandiso ichi chinoshanda chePDF | Linux Vakapindwa muropa
PDF Sanganisa Turu Haisi chishandiso chitsva, zvisinei, iyo yakagadzika vhezheni 1.0 yechirongwa ichi chinoshamisa chekushanda nePDF ikozvino yaburitswa. Pakati pezvakakurumbira zvitsva zvekuburitswa uku kuri kugadzirisa mune yayo yakajeka graphical, mukana wekugadzirisa metadata yegwaro rePDF uye kuenderana neraibhurari yeQt6.
Neichi chishandiso chinoshanda iwe unogona shandisa mafaira ePDF paunoda iwe. Kubva pane zvakajairika kugadzirisa mabasa muPDF, kubvisa, kudzima, kana kutenderera mapeji egwaro, kubatanidza maPDF akati wandei kuita rimwe, kuwedzera mapeji asina chinhu, kuchinjisa marongero epeji (saizi, kutungamira, huwandu hwemitsara nemakoramu, margins, nezvimwe .), Wedzera mafomu, chinja metadata, nezvimwe.
PDF Sanganisa Turu inogona kuita zvese izvi nekutenda ku kushandiswa kweQPDF, uye ikozvino nekuburitswa uku unozokwanisa kushanda mune yakajeka uye yakapusa nzira. Hakuchazovazve nematabo efaera rimwe uye akawanda. Iyo padivi parutivi ikozvino inosanganisira ese aripo mashandiro mukutarisa, imwe neimwe iine icon yayo, kuti zviite nyore kuzviwana.
PDF Murongi imwe nzira yePDF Sanganisa Chishandiso, chete inoshandisa GTK uye pikepdf panzvimbo yeQPDF.
Imwe shanduko yakakosha mushanduro iyi v1.0 yePDF Musanganiswa Turu ndiko kugona edit metadata. Unogona kushandura zita, munyori, chidzidzo, mazwi akakosha, musiki, mugadziri, uye nezuva rekusika nekushandurwa. Kune zvekare kumwe kuvandudzwa, uye ndiko kuti ichaedza kuchengetedza zvinongedzo, zvirevo uye madhayagiramu pazvinogoneka.
Qt6 rutsigiro yakawedzerwawo, kuwedzera kune vamwe kukanganisa kururamisa izvo zvaive mushanduro dzakapfuura.
Para dhawunorodha PDF Sanganisa Turu v1.0, unogona kuwana izvidownload nzvimbo. Iwe uchaiwana ichiwanikwa muSpap uye Flatpak fomati, uyezve mune mamwe marekodhi emamwe ma distros akadai seArch Linux neManjaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » PDF Sanganisa Chishandiso 1.0: iyo nyowani vhezheni yechishandiso ichi chishandiso chiri kunze
Epic Mitambo maringe neApple. Dare reAustralia rinogamuchira masimba